Khilaafkii u dhaxeeyay Madaxda ugu sareysa Hirshabeelle oo – Kismaayo24 News Agency
by admin 21st January 2020 087
Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ku guuleystay inuu dhex dhexaadiyo Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Cusmaan Barre, kaddib markii uu xalay kulan casho ah uu hoygiisa Muqdisho ugu sameeyay.
Kulankan ayaa waxaa xal looga gaaray, laguna soo afjaray khilaafkii ka dhaxeeyay Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle,
Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa isa soo tarayay guux ku aadan Mooshin ka dhan ahaa Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo la sheegay inay wadeen Xildhibaano taageersan Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Sawirro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay Madaxweynaha Hirshabeelle, Kuxigeenkiisa iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka oo gacmaha is heysta, isla markaana muujinaya xal ka gaarista khilaafkooda.
Maamulka Hirshabeelle oo muddo xileedkiisa ay ka harsan tahay illaa 8 bilood ayaa sanadihii u dambeeyay ku dhameystay khilaafaad ragaadiyay maamulkaas iyo waxqabad la’aan, waxaana Madaxda Maamulkaas lagu dhaliilay in Muqdisho ay u noqotay hoygooda oo kale, oo ay ku qaateen in badan oo ka mid ah mudadii ay xilka joogeen.
Ciidamada ammaanka Deegaanka Bari oo qarax fashiliyey
TOP NEWS: Maxaad ka ogtahay in Maamulka Puntland ay Dekedda Boosaso ku qabteen Gaadiid Dagaal oo ay leedahay Galmudug